Yawnathan - Yawnathan News
စစ်တပ် ရင်ဆိုင်နေရသော စိန်ခေါ်မှုကြီး ခုနှစ် ခု
ထိုအချက်များကို အမေရိကန်ရှိ ဝုဒ်ရိုး ဝီလ်ဆန် စင်တာ တွင် အာရှ ရေးရာများ ကို သွားရောက်လေ့လာနေသူ တကောင်း အင်စတီကျု ၏ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ ဦးရဲမျိုးဟိန်း မှ ဧရာဝတီ နှင့် တွေ့ဆုံခန်းတွင် ယခုလို ထောက်ပြသွားခဲ့သည်။ (၁) စစ်တပ်သည် ကျစ်လစ်တောင့်တင်းစွာ ဖွဲ့စည...
Hla Soewai - 27 Jun 09:19 PM
မည်သို့များ အကျိုးအမြတ် ထွက်ပေါ်လာနိုင်သနည်း
မင်းအောင်လှိုင်၏ အာဏာသိမ်း မှုသည် ဗိုလ်သန်းရွှေ ခေတ်နှင့် မတူ ဆိုးရွားသော အနေအထား နှင့် ရင်ဆိုင် နေရပြီ ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်သန်းရွှေ စစ်အစိုးရသည် နိုင်ငံတကာ၏ ဖိအားများ၊ ဖယ်ကျဉ်ခံထားရမှုများ၊ စီးပွားရေး ဒဏ်ခတ်မှုများ လောက်သာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး ပြည်တွင်း ဆန့်ကျင် တ...
စစ်ကောင်စီ၏ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဆိုသူ မြထွန်းဦးသည် ဖနွမ်းပင် ရှိ အာဆီယံ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးသို့ ရောက်ရှိပြီး ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ပေးပါမည် ကျေနပ်လို ကျေနပ်ငြား ပြောနေချိန်တွင် မန္တလေး တွင်တော့ စစ်ကောင်စီ သစ္စာခံ တပ်များ က ရပ်ကွက်များ အတွင်း အင်အား အ...
မြန်မာ စစ်တပ် နေဝင်ချိန် ရောက်လုနီးပြီလော
Is Myanmar military on its last legs? ခေါင်းစဉ် ဖြင့် နယူးယောက် အခြေစိုက်မဟာဗျူဟာ နှင့် နိုင်ငံတကာ လေ့လာရေး စင်ဝာာ မှ ဇွန်လ ၂၁ နေ့က သုံးသပ်ထားသည်ကို ပြန်လည် တင်ပြပါသည်။ မြန်မာစစ်တပ်သည် ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ရေး အတွက် အကြောက်အကန် ရုန်းကန်နေရပြီ ဖြစ်သည် ဆ...
စီအိုင်အေ သုတေသီ ပြောသော မြူမှုန် ဝိုးတဝါး ကြားက ဗမာပြည် (29)
by Hla Soewai - Jul 01 2022 01:06 PM
ရွေးကောက်ပွဲ မကောင်းဆိုးဝါးများ တောထုတ်ခန်း (၈) အမေရိကန် အဖို့ ရှေ့လျှောက် အပြစ်ဒဏ်ခတ် အရေးယူရမည်လော၊ အပြုသဘော ဆောင်သည့် ဆက်ဆံရေး မျိုး ကျင့်သုံးရမည်လော ဆိုသည်မှာ မြန်မာပြည်သူများ လက်ခံနိုင်သော ရွေးကောက်ပွဲမျိုး ဖြစ်လာ မလာ ကို စောင့်ကြည့်ဖို့ လိုအပ...
by Hla Soewai - Jul 01 2022 07:53 AM
သမိုင်း အဆက်ဆက် တော်လှန်ရေးများ၏ ကောက်ကြောင်းများ(19)
by Hla Soewai - Jun 29 2022 11:38 AM
ကျည်ဆံများ၊ ဒဏ္ဍာရီများကြားက မက္ကဆီကန် တော်လှန်ရေး (နိဂုံး) ပြည်သူများ၏ စီးပွားရေး နှင့် နိုင်ငံရေး အခွင့်အလမ်းများကို ကာလကြာမြင့်စွာကပင် ချိုးဖောက် ဖျက်ဆီးနေသည့် အာဏာရှင်တဦးအား ဆန္ဒပြ ကန့်ကွက်မှုများ နှင့် စတင်ခဲ့သော မက္ကဆီကန် တော်လှန်ရေးသည် အထွတ်...
စီအိုင်အေ သုတေသီ ပြောသော မြူမှုန် ဝိုးတဝါး ကြားက ဗမာပြည် (28)
by Hla Soewai - Jun 28 2022 12:05 PM
ရွေးကောက်ပွဲ မကောင်းဆိုးဝါးများ တောထုတ်ခန်း (၇) ရွေးကော်၏ လုပ်ရပ်အား အမေရိကန်က ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆူပူ ရှုတ်ချခဲ့သည်။ “ကိုယ်စားလှယ် လောင်း ၁၀၀ နီးပါး ကို ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိဘဲ ခွဲခြား ဆက်ဆံရန် ချမှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးချကာ ပယ်ချခဲ့...
စီအိုင်အေ သုတေသီ ပြောသော မြူမှုန် ဝိုးတဝါး ကြားက ဗမာပြည် (27)
by Hla Soewai - Jun 27 2022 12:16 PM
ရွေးကောက်ပွဲ မကောင်းဆိုးဝါးများ တောထုတ်ခန်း (၆) ၂၀၁၂ ဧပြီလ ထဲတွင် အသစ် ပြန်လည် မှတ်ပုံတင်လာသော NLD နှင့် ဥက္ကဌ ဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်သည် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ မကောင်းဆိုးဝါး ကြီးကို တောထုတ်ရန် ပထမ ခြေလှမ်းကို စတင် လှမ်းလာခဲ့သည်။ ဤသည်က အစိုးရသစ်တွင...
စီအိုင်အေ သုတေသီ ပြောသော မြူမှုန် ဝိုးတဝါး ကြားက ဗမာပြည် (26)
by Hla Soewai - Jun 26 2022 07:58 PM
ရွေးကောက်ပွဲ မကောင်းဆိုးဝါးများ တောထုတ်ခန်း (၅) မြန်မာပြည်၏ နိုင်ငံရေး မျက်နှာစာ သည် မှောင်မိုက်နေဆဲ ဖြစ်သော်လည်း တောက်ပသည့် နေရာ တခုက ကွက်ကွက်ကလေး ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ရွေးကောက်ပွဲ အပြီး တပတ်အကြာတွင် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်အား အကျယ်ချုပ်မှ ပြန်လွှတ်ပေးလ...
သမိုင်း အဆက်ဆက် တော်လှန်ရေးများ၏ ကောက်ကြောင်းများ(18)
by Hla Soewai - Jun 24 2022 11:07 AM
ကျည်ဆံများ၊ ဒဏ္ဍာရီများကြားက မက္ကဆီကန် တော်လှန်ရေး (၅) မြို့တော် မက္ကဆီကို စီတီးသို့ တောင် နှင့် မြောက်အရပ်မှ နှစ်ဖက်ညှပ်၍ ထိုးစစ် ဆင်လာနေချိန်တွင် မြို့တော် အတွင်း နောက်ထပ် အလှည့်အပြောင်းတခု ဖြစ်ပေါ်လာပြန်သည်။ ဝဲလ်တာအား သဘောထား တဖက်စွန်း ရေ...
စီအိုင်အေ သုတေသီ ပြောသော မြူမှုန် ဝိုးတဝါး ကြားက ဗမာပြည် (25)
by Hla Soewai - Jun 23 2022 10:20 AM
ရွေးကောက်ပွဲ မကောင်းဆိုးဝါးများ တောထုတ်ခန်း (၄) လမ်းပြမြေပုံ နောက် တကောက်ကောက် ********************************* အမေရိကန်သည် လာလတံ့သော ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် မူဝါဒပိုင်းအရ မည်သို့ ချဥ်းကပ်ရမည်ကို သုံးသပ်နေစဉ် အတွင်း SPDC ကတော့ ရှေ့သို့ ချီတက်န...
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံအား နေပြည်တော် အကျဉ်းထောင် ထဲတွင် အမှု စစ်ဆေးမည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်
by Hla Soewai - Jun 22 2022 09:05 PM
မြန်မာပြည်သူတို့၏ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ တရားခွင်အား နေပြည်တော် တွင် အသစ် ဆောက်လုပ်ပြီးသွားသည့် အကျဉ်းထောင်သို့ ပြောင်းရွှေ စစ်ဆေးမည်ဟု အမှု နှင့် နီးစပ်သော ယုံကြည်ရသည့် သတင်းအရင်းအမြစ်ကို ကိုးကားပြီး ‌AFP သတင်းအား လန်ဒန်ရှိ ဒေးလီးမေးလ် သတင...
စီအိုင်အေ သုတေသီ ပြောသော မြူမှုန် ဝိုးတဝါး ကြားက ဗမာပြည် (24)
by Hla Soewai - Jun 22 2022 10:34 AM
ရွေးကောက်ပွဲ မကောင်းဆိုးဝါးများ တောထုတ်ခန်း (၄) ရွေးကောက်ပွဲ နှင့် စပ်လျင်း၍ နိုင်ငံတကာတွင် အခြေအတင် ဆွေးနွေးမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက် တွင် NLD သည် အဖမ်းဆီးခံ အဖွဲ့ဝင်များ အား ထုတ်ပယ်ရန် ငြင်းဆန်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ် မှောက်လာသည့် အတွက် ပါတီမ...
ဝင်္ကာဘာ ထဲက စစ်ခေါင်းဆောင်များ
by Hla Soewai - Jun 21 2022 07:18 PM
မြန်မာ ပြဿနာအား ကြေကွဲဖွယ်ရာ ဖြစ်ရပ်များ နှင့် ကောက်ကျစ်ယုတ်မာမှုများ ရောယှက်နေမှု အဖြစ် နိုင်ငံ ရေး သီအိုရီ လေ့လာသူ များက သတ်မှတ်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်ဟု ဩစတေးလျှ မဟာဗျူဟာ ပေါ်လစီ အင်စတီကျု ကြီးတွင် ရေးသားခဲ့သည်ကို ဖတ်ရှုခဲ့ရသည်။ ကောက်ကျစ်ယုတ်မာမှု များ နှင့် ပြ...
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ၏ တရားရုံး မွေးနေ့ပွဲ နှင့် မြန်မာသည် အာဆီယံအား အကြီးအကျယ် ဒုက္ခပေးလာနေဟု မလေးရှား ဝန်ကြီးပြော
by Hla Soewai - Jun 21 2022 07:16 PM
အသက် ၇၇ နှစ် ပြည့်လာနေပြီ ဖြစ်သည့် နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံသည် သူမ၏ မွေးနေပွဲလေးအား တရားရုံးတွင် ပြုလုပ်ခွင့် ရခဲ့ပြီး ရှေ့နေများက သူမအား ဖမ်းဆီးချူပ်နှောင်ထားသည့် လျို့ဝှက်နေရာသို့ လုံခြုံရေး အစောင့်များမှ တဆင့် ကြိုတင် ပို့ပေးထားသည့် ကိတ်မုန့်ကို လှီးကာ ...
Visitor Counter : 765504